Soo-saareyaasha Nidaamyada Magnet & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshad Sifeynta Magnetic
Saxan Magnet ah oo loogu talagalay gudbinta Kala Bixinta Suunka
Saxanka birlabta 'Magnetic Plate' ayaa sida ugu habboon loogu isticmaalaa in looga saaro birta xarkaha ah waxyaabaha ku dhaqaaqa ee lagu qaado marinnada godadka, tuubbada ama suumanka wax lagu qaado, shaashadaha, iyo baakidhka quudinta. Hadday maadadu tahay caag ama saxarka waraaqda, cuntada ama bacriminta, Saliida ama faa'iidooyinka, natiijadu waa hubaal ilaalinta mashiinada wax lagu farsameeyo.
Kala-soocida Magnetic Grate oo leh ulo badan
Kala-soocida magnet-ka ee leh ulo badan ayaa si wax ku ool ah uga saaraya wasakhda birta ah ee alaabada qulqulka bilaashka ah sida budada, granules, dareerayaasha iyo emulsions. Waxaa si fudud loogu meeleeyaa qoob-ka-ciyaarka, meelaha laga soo qaato badeecada, buushashka iyo meelaha laga soo saaro alaabooyinka dhammaaday
Khaanadda 'Magnetic' waxaa lagu dhisay koox ka mid ah godadka magnetka iyo guri bir bir ah ama sanduuqa birta lagu rinjiyeeyo. Waxay ku habboon tahay in laga saaro waxyaabaha wasakhda leh ee dhexdhexaadka ah iyo kuwa ganaaxa ee ka imanaya alaabooyin qulqulaya oo bilaash ah. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa warshadaha cuntada iyo warshadaha kiimikada.
Square Magnetic Grate wuxuu ka kooban yahay biraha magnetka ee Ndfeb, iyo qaabka sheybaarka magnetka uu ka sameysan yahay birta birta ah. Qaabkan magnetka shabakada ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha iyo xaalada goobta wax soo saar, tuubooyinka birlabta ee caadiga ah dhexroor caadi ah waa D20, D22, D25, D30, D32 iyo ect.
Dabinka magnetka waxaa laga sameeyaa kooxda tuubbada birlabta iyo guriga tuubbada birta ah ee birta weyn leh. Sida nooc ka mid ah filter magnetic ama SEPARATOR magnetic, waxaa si ballaaran loo isticmaalaa kiimikada, cuntada, Pharma iyo warshadaha u baahan nadiifinta heerkeeda ugu fiican.
Dabinnada Liquid Magnetic
Dabinnada Liquid Magnetic waxaa loogu talagalay in laga saaro oo laga nadiifiyo noocyada maaddooyinka macdanta leh ee ka soo baxa khadadka dareeraha iyo qalabka wax lagu farsameeyo. Biraha macdanta leh ayaa si magnetik ah looga soo saaray qulqulkaaga dareeraha ah waxaana lagu ururinayaa tuubooyinka birlabta ama kala-soocayaasha magnet-ka.
Tuulada Magnetic-ka ayaa loo isticmaalaa in looga soo saaro waxyaabaha wasakhda ah ee bilaashka ah wasakhda birta. Dhammaan walxaha biraha sida birta, lowska, jajabyada, birta cagajuglaynta waxyeellada leh waa la qaban karaa oo si wax ku ool ah loo hayaa.